ကလေးအမေတစ်ယောက်ရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် တစ်သက်တာလုံး ရင်ကျိုးရမယ့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခု - MM Live News
ကလေးအမေတစ်ယောက်ရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် တစ်သက်တာလုံး ရင်ကျိုးရမယ့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခု
May 12, 2019 May 12, 2019 MM Live News
ဒီပို့လေးက ယမန်နေ့က တင်ခဲ့တဲ့ပို့လေးပါ..။ တစ်ချို့လူတွေက ပုံပဲပါတာဆိုတော့ သိပ်ယုံကြလို့ အခု ဗွီဒီယိုဖိုင် ထွက်လာလို့ ပြန်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကလေးအမေတစ်ယောက်ရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် တစ်သက်တာလုံး ရင်ကျိုးရမယ့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို သင်ခန်းစာအနေနဲ့ မိခင်တိုင်း သတိရှိကြစေချင်ပါသည်။
မိခင် အွန်လိုင်းသုံးနေတုန်း ကလေးတင်ထားတဲ့ ဘီးတပ်ထိုင်ခုံက လမ်းပေါ်လိမ့်ပြီး ကားတိုက် သေဆုံး
အွန်လိုင်းသုံးရတာ ပျော်ရဲ့လား မေမေ အွန်လိုင်းကို သားထက် ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားတဲ့မေမေ အခုသားမေမေ့ကို အပြီးတိုင်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်..။
မေမေ အားရအောင်ငိုပြီးရင် မေမေ အွန်လိုင်းဆက်သုံးနေပါမေမေ..။ မေမေ အွန်လိုင်းသုံးနေလို့ သားသေသွားရတယ်ဆိုပြီး မေမေ တစ်သက်လုံး အွန်လိုင်း မသုံးတော့ပဲ နေလို့မှ မရတာ မေမေ မနေနိုင်ဘူးဆိုတာလည်း သားသိပါတယ်မေမေ..။
မေမေ က သားကို ဂရုမစိုက်ပဲ အွန်လိုင်းကိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေတော့ သားအရမ်းပျင်းတယ်မေမေ..။ ဒါကြောင့် သား ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ချင်လွန်းလို့ သားကိုယ်တိုင် မေမေ တင်ပေးထားတဲ့ ဘီးလှိမ့်ထိုင်ခုံလေးကို ရွေ့အောင် ကြိုးစားလိုက်တာ သား လမ်းမပေါ်ရောက်သွားစတယ်မေမေ..။
သားအိမ်တံခါးကြီးကို သားအားလေးနဲ့ တွန်းဖွင့်နေတဲ့အထိ မေမေ သားကို သတိမထားမိသေးဘူးမေမေ…။
အိမ်တံခါးကြီး ပွင့်သွားပြီး သား အိမ်ရှေ့လမ်းမကြီးပေါ်ရောက်ပြီမေမေ..။
ဒုန်းဆိုတဲ့ အသံကြားမှ မေမေ သားကို သတိရတယ်မဟုတ်လား..။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ သား မရှိတော့ဘူးမေမေ..။ ApannPyay
Source – Social Action for Children and Women – SAW
ထိုင်းနိုင်ငံ စမုပရကမ် မှာ ကလေးကို တွန်းလှည်း အတွင်းမှာထဲ့ထားပြီး အမေကဖုန်းနဲ့ အွန်လိုင်းသုံးနေတဲ့အချိန် ကလေးက သံ တံခါး ကို တွန်းဖွင့်ပြီး လမ်းမပေါ်ထွက်သွားခဲ့လို့(၈) လသားကလေးဟာ ကုန်ကားကြီးနောက်ဘီးနဲ့ကြိတ်မိပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ CCTV ရုပ်သံဖြစ် ပါတယ်။
ရုပ်သံမှာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကုန်တင်ကားမောင်းသူဟာ ခလေးကိုမြင်လို့ ကွေ့ေ၇ှာင်လိုက်ပါတယ် ခလေးဟာ နောက်ဘီးကြားမှာဝင်သွားတာမြင်ရမှာပါ။
When mother was using online ,Her 8-month-old child opened the front door and running on the road with child care chair. Later child was death crushed by truck
Credit – Social Action for Children and Women – SAW
ဘုရားရှိခိုး မပျင်းကျပါနဲ့ဘုရားရှိခိုး ပူဇော်ရသော အကျိုး ရှစ်မျိုး
ဖန်ဂရမ်ရာဇီတောင်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ မစိမ့်ထက်ကို ကြိုးစားရှာဖွေခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…
May 27, 2019 MM Live News
​တောင်​သမန်​ နတ်ပွဲ လှေပြိုင်ပွဲက အကြီးအကျယ်​ ရိုက်​ပွဲ….
September 28, 2018 MM Live
ယနေ့ မင်္ဂလာဆောင်မယ့် သတို့သမီးလောင်း ကြိုးဆွဲချသေဆုံးသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်…
May 5, 2019 MM Live